साउन २ ।देशमै सबैभन्दा धेरै मासु खपत हुने काठमाडौंका मासु पसल अझै व्यवस्थित हुन नसकेको जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरका डा. मधु उपाध्यायले बताएका छन् ।
नियमित अनुगमन गरेपछि राँगाबाहेक अन्य मासु पसलमा ३० प्रतिशत सुधार आएको जनाउँदै डाक्टर उपाध्यायले मानिसको स्वास्थ्यलाई हानी पुग्ने गरी मासु बेच्ने पसलहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको बताए ।
‘काठमाडौंमा दर्ता नगरी चलाइएका मासु पसल पनि छन्, मूल्यसूची नराखिँदा पसलैपिच्छे मूल्य फरक-फरक छ’, उपाध्यायले भने, ‘मासु पसलले धेरै फटाइँ गरेका छन्, डिपफ्रिज राखेको मासु पनि खान योग्य पाइएन ।’
राँगाको मासु फोहोरमै
काठमाडौंमा ममका लागि तराईबाट ल्याइने राँगा अहिले पनि फोहोरमै काटिने गरेको पाइएको छ । पटक-पटक अनुगमन गर्दा पनि राँगा काट्ने ठाउँ ब्यवस्थित नपाइएको सकारी निकायको भनाइ छ ।
‘ठूलो ठाउँ र प्रशस्त पानी चाहिने भएकाले राँगा काट्ने ठाउँ अझै व्यवस्थित भएका छैनन्, राँगा बध गर्ने ठाउँमा सुधारको कार्यक्रम गरिनुपर्छ’, डा. उपाध्यायले भने, ‘चार वर्षपछि काठमाडौंमा राँगा बध गरिनुहुन्न, धादिङ या अन्य जिल्लामा बध गरेर मासु ल्याउनुपर्छ ।’
ग्रिन लोगो वितरण गर्ने तयारी
सरकारी निकाय, उपभोक्ता र व्यवसायीहरुको संयुक्त अनुगमनपछि सफा मासु बेच्ने व्यवसायीलाई सरकारले गि्रन लोगो दिने तयारी गरेको छ ।
‘टोलैपिच्छे मासु पसल छन्, उपभोक्ताले खरिद गर्नै समस्या छ’, डा. उपाध्यायले भने, ‘सरकारले चाँडै गि्रन लोगो वितरण गरेर सफाईप्रति व्यवसायी र उपभोक्तलाई जागरुक गराउने तयारी गरेको छ ।’
भाऊ घट्ने बेलामा मासु झन महंगियो
यसैवीच साउन महिनामा सस्तो हुनुपर्ने मासु यतिबेला झनै महंगिएको छ । कुखुराको मासु मागअनुसार बजारमा आपूर्ति हुन नसक्दा अन्य मासुको पनि भाउ बढेको हो ।
गत वर्ष बर्डफ्लूका कारण लाखौं माऊ कुखुरा मारिएपछि चल्ला उत्पादन हुन नसक्दा कुखुराको मासुको भाउ बढेको हो । यति बेला काठमाडौंमा कुखुराको मासुको भाउ प्रति किलो ४ सय नजिक पुगेको छ । खसीको मास पनि प्रतिकिलो ८ सय भन्दा माथि बिक्री भइरहेको छ ।
कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले अहिले जिउँदो कुखुरा २ सय ७० रुपैयाँ किलोले बेचिरहेको छ । खुद्रा व्यापारीले २ सय ९० रुपैयाँमा बेचिरहेका छ्न । ब्रोइलर कुखुराको मासु भने अहिले काठमाडौंमा ३ सय ७५ देखि ३ सय ९० रुपैयाँ किलोसम्म बिक्री भइरहेको छ ।
काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी राँगाको मासु खपत हुन्छ । त्यसपछि कुखुराको मासु खपत हुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । खसीको मासुको खपत कुखुराको भन्दा कम रहेको छ । राँगाको मासु मम बनाउन धेरै खपत हुने गरेको छ । काठमाडौंबासीको चुल्होमा धेरैमात्रामा कुखुरा र खसीको मासु पाक्ने गरेको छ ।
विवाहको लगन नभएको र अन्य पर्व पनि नपरेकाले वषर्ायाममा मासुको माग कम हुने गरेको छ । तर, यहीबेला मूल्य भने बढिरहेको हो । व्यवसायीले भने कुखुरा पर्याप्त बजारमा पुर्‍याउन नसक्दा खसीको मासुको पनि मूल्य बढेको दाबी गरेका छन् ।
कुखुरा व्यवसायी संघका सदस्यसक्षम घिमिरेले दुई महिनायता मासुको मूल्य बढेको बताए । ‘गत वर्ष फैलिएको बर्डफ्लूका कारण धेरै कुखुरा मारिएपछि यो बेला मासुको अभाव भएको हो’, घिमिरेले भने, ‘माउजति सबै मारिएकाले चल्ला उत्पादनमा समय लाग्यो, नयाँ माउ तयार पारेर चल्ला उत्पादन गर्दा समय लागेकाले बजारमा पर्याप्त मासु पठाउन सकिएको छैन ।’
काठमाडौंमा दैनिक ३ लाख किलोग्राम कुखुराको मासु खपत हुने गरेको कुखुरा व्यवसायी संघको भनाइ छ । काठमाडौंमा खपत हुने खसीको मासु पनि ९० प्रतिशत भारतबाट आउने गरेको छ । नेपाली खसीले बजारको माग धान्न नसकेपछि भारतबाट ल्याउने गरिएको छ ।
गर्मीले उत्पादन कम
बर्डफ्लूले माउ कुखुरा मासिएपछि यो वर्ष व्यवसायीले माग बमोजिम्को मासु बजारमा दिन सकेका छैनन् । खसी पनि भारतबाट ल्याउनुपरेकाले तथा दोब्बर महंगो हुनाले उपभोक्ताको पहिलो रोजाइ कुखुराको मासुमै छ ।
पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट बजारको माग बमोजिम् मासु दिन नसकेकाले भाउ केही महंगिएको स्वीर्काछन् । ‘गर्मी अत्याधिक भएकाले कुखुराले चारो खाइदिँदैन, धकाएर बसिराख्छ । ४० दिनमा तयार हुने कुखुरा यो बेला बजार लैजाँदा ४५ दिन लाग्छ’, विष्टले भने, ‘एकातिर माग बढी छ, अर्कातिर हाम्रो लागत पनि बढेको छ । त्यही कारणले मासुको मूल्यमा केही वृद्धि भएको हो ।’
देशभरमा सबैभन्दा बढी कुखुरा पालन हुने चितवनमा बढेको गर्मीले व्यसायीलाई समस्यामा पारेको छ । चितवनमा तापक्रम ३५ डिग्री आसपासमा हुँदा गर्मी नियन्त्रण गर्ने आधुनिक घरको अभावले कुखुराले चारो नखाइदिँदा व्यवसायीलाई समस्या भएको छ ।
पोल्ट्रीका लागि आवश्यक सबै कच्चा पदार्थको भाउ यो बेला घटेको छ । गर्मीमा कुखुरा उत्पादन गर्नमै ढिला भएकाले मूल्य बढेको व्यवसायीको भनाइ छ । मासुको भाउ व्यवसायीहरुले नियतवश नबढाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘अहिले मासुको मूल्य बढाउनमा व्यवसायीको कुनै नियत छैन, चोकरको मूल्यमा समेत केही वृद्धि भएको छ’ दाना उत्पादक व्यवसायी डा. तिलचन्द्र महतले भने, ‘दानामा भएको १ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्यवृद्धिले पनि मासुको भाउ बढाउन मद्दत गरेको छ, गर्मीकै कारण पनि कुखुराले चारो नखाँदा हुर्कन बढी समय लागेकाले मूल्यमा थप वृद्धि भएको हो ।’
भाऊ तलमाथि हुनुको कारण
कुखुरा व्यवसायी महासंघका महासचिव बाबुराजा रावल सरकारले नीति बनाउन नसक्दा मासुको भाउमा अनपेक्षित तलमाथि हुने गरेको बताउँछन् । ‘गतसाल कुखुरा व्यवसायीले अर्बौं रुपैयाँ गुमाउनुपर्‍यो, सरकारले केही सहयोग गर्दैन’, रावलले भने, ‘सरकारले लामो समय सम्म अहिले पनि कृषकहरु कुखुरा पाल्न डराइरहेका छन्, कुखुराको अभाव हुँदा खसी पनि बजारमा पर्याप्त पाइन्न, सरकारले राम्रो कानुनी व्यवस्था गर्न सकेन भने यो समस्या बढ्दै जान्छ ।-अनलाइनखबर